အားပေးကြမ်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကြောင့် ပစ္စည်းပြတ်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂျာစီ – Sports Soccer News
အားပေးကြမ်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကြောင့် ပစ္စည်းပြတ်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂျာစီ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွေ့လာတဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့. ကျောနံပါတ် ၇ ဂျာစီများ ပရိတ်တွေရဲ့ အားပေးမှူကို တခဲနက် ရရှိခဲ့ပြီး စျေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းမလောက်ဖြစ်နေကြောင်း Daily Mail သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပရိတ်သတ် အချစ်‌တော်ကစားသမားဟောင်း ရော်နယ်ဒို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ခြင်းကို ယူနိုက်တက် အသင်းအားပေးသူပရိသတ်များက အလွန်ပျော်ရွှင်နေကြပြီး ရော်နယ်ဒိုရဲ့အမည်နဲ့ ကျောနံပါတ်ပါ ဂျာစီများကို အလုအယက် ဝယ်ယူနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အိုးထရတ်ဖိုဒ့်ကွင်းရှေ့တွင် ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်များ လူတန်းရှည်ကြီး ဖြစ်သည် အထိ တန်းစီစောင့်ဆိုင်း အားပေးနေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များကြောင့် ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ကျောနံပါတ် ၇ ပါ ဂျာစီများမှာ တရားဝင်အရောင်းဆိုင်များတွင် ပစ္စည်းပြတ်လတ်သည့်အထိ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂျာစီများကို ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Adidas ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက “ပရိသတ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်မီဖို့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ တောင်းဆိုမှုများလွန်းနေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အလျဉ်းမမီဖြစ်နေပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ပထမအကြိမ်ကစားစဉ်က ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် နာမည်ကျော် ကျောနံပါတ် ၇ ဂျာစီကို ပြန်လည်ဝတ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကျောနံပါတ် ၇ ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်နေတဲ့ ကာဗာနီက ကျောနံပါတ် ၂၁ ဂျာစီကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္ အသင္းကို ေျပာင္းေ႐ြ႕လာတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕. ေက်ာနံပါတ္ ၇ ဂ်ာစီမ်ား ပရိတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႉကို တခဲနက္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းမေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း Daily Mail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ယူနိုက္တက္အသင္းသို႔ ပရိတ္သတ္ အခ်စ္‌ေတာ္ကစားသမားေဟာင္း ေရာ္နယ္ဒို ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့ျခင္းကို ယူနိုက္တက္ အသင္းအားေပးသူပရိသတ္မ်ားက အလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကၿပီး ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕အမည္နဲ႕ ေက်ာနံပါတ္ပါ ဂ်ာစီမ်ားကို အလုအယက္ ဝယ္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အိုးထရတ္ဖိုဒ့္ကြင္းေရွ႕တြင္ ယူနိုက္တက္ပရိတ္သတ္မ်ား လူတန္းရွည္ႀကီး ျဖစ္သည္ အထိ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း အားေပးေနၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္မ်ားေၾကာင့္ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ေက်ာနံပါတ္ ၇ ပါ ဂ်ာစီမ်ားမွာ တရားဝင္အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ပစၥည္းျပတ္လတ္သည့္အထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ယူနိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ဂ်ာစီမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ Adidas ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးက “ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္မီဖို႔အတြက္ မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပရိသတ္ေတြ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလြန္းေနတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလ်ဥ္းမမီျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေရာ္နယ္ဒိုဟာ ယူနိုက္တက္မွာ ပထမအႀကိမ္ကစားစဥ္က ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာနံပါတ္ ၇ ဂ်ာစီကို ျပန္လည္ဝတ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေက်ာနံပါတ္ ၇ ဂ်ာစီကို ဝတ္ဆင္ေနတဲ့ ကာဗာနီက ေက်ာနံပါတ္ ၂၁ ဂ်ာစီကို ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပြင်သစ်မှာဂိုးသွင်းပြရင်း မန်ယူက ‌ရော်နယ်ဒိုတို့ကို ပွဲထွက်ခွင့် သတိပေးလိုက်တဲ့ မာရှယ်
ဒီကလန်ရိုက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီဖြစ်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ ချဲလ်ဆီး